मांसपेशी आराम गर्ने: प्रयोग, साधारण ब्रान्ड, र सुरक्षा जानकारी - औषधि जानकारी | अगस्ट 2021
समुदाय, कल्याण औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समाचार, कल्याण कम्पनी समुदाय प्रेस चेकआउट औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर
मुख्य >> औषधि जानकारी >> मांसपेशी आराम गर्ने: प्रयोग, साधारण ब्रान्ड, र सुरक्षा जानकारी
मांसपेशी आराम गर्ने: प्रयोग, साधारण ब्रान्ड, र सुरक्षा जानकारी
मांसपेशी आराम गर्ने सूची | मांसपेशी रिलैक्सन्ट के हो? | कसरी उनीहरू काम गर्छन् | उपयोगहरु | प्रकारहरू | कसले मांसपेशी आराम गर्न सक्छ? | सुरक्षा | साइड इफेक्ट | लागत
यदि तपाईंले कहिले मांसपेशिको ऐंठनको अनुभव गर्नुभएको छ भने, तपाईंले कंकाल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ मांसपेशी आराम जस्तै स्केलेक्सिन वा फ्लेक्सेरिल पीडा राहतको लागि। मांसपेशी दुखाई वा ऐंठन हल्का ऐंठन वा टिभी देखि दुर्बृद्धि हुने दर्द सम्मिलित हुन सक्छ, जहाँ तपाईं यस्तो महसुस गर्नुहुन्छ कि तपाईं सार्न पनि सक्नुहुन्न।
आराम, बरफ वा तातो, शारीरिक उपचार, र एक nonsteroidal विरोधी भड़काऊ औषधि (NSAID) जस्तै Ibuprofen Musculoskeletal पीडा को लागी लोकप्रिय पहिलो लाइन उपचार हो। यद्यपि, यदि एनएसएआईडी पर्याप्त छैन वा यदि तपाईंको पीडा धेरै गम्भीर छ भने, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले गम्भीर दुखाइको लागि पर्चा-बल मांसपेशी आराम दिन सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ उपचार विकल्पहरूको रूपमा उपलब्ध धेरै एफडीए-अनुमोदित मांसपेशी शिथिल छन्। मांसपेशी शिथिलहरूको बारेमा सबै जान्नको लागि पढ्न जारी राख्नुहोस्। तलको ट्याब्लेटले सबै भन्दा सामान्य मांसपेशी विश्रामकर्ताहरूको सूची गर्दछ।
मांसपेशी विश्रामकर्ताहरूको सूची
ड्यान्ट्रियम, रेवन्टो, रायनोडेक्स (ड्यान्ट्रोइन) 90 १2२ को लागि 90 ०, २ mg मिलीग्राम क्याप्सूल ड्यान्ट्रोलीन कुपनहरू पाउनुहोस् ड्यान्ट्रोलीन विवरणहरू
फ्लेक्सेरिल, अम्रिक्स, फेक्समिड (साइक्लोबेन्जाप्रिन) 30 १ for० को लागि ,०, १० मिलीग्राम ट्याब्लेट साइक्लोबेन्जाप्रिन कुपनहरू पाउनुहोस् साइक्लोबेन्जाप्रिन विवरण
लिओरेसल, ओजोब्याक्स (ब्याक्लोफेन) 90 २0० को लागि mg ०, १० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू बेक्लोफेन कुपनहरू पाउनुहोस् Baclofen विवरणहरू
Lorzone, DSC Strong Parafon (chlorzoxazone) 30 ,०, mg०० मिलीग्राम ट्याब्लेटका लागि Chlorzoxazone कुपन पाउनुहोस् Chlorzoxazone विवरण
नोर्फ्लेक्स (ओर्फेनाड्रिन) २०, १०० मिलीग्राम ट्याब्लेटका लागि $।। Orphenadrine कूपन पाउनुहोस् Orphenadrine विवरण
रोबक्सिन (मेथोकार्बमोल) 60 for०, 5050० मिग्रि ट्याब्लेटका लागि मेथोकार्बमोल कूपनहरू पाउनुहोस् मेथोकार्बमोल विवरण
स्केलेक्सिन (मेटाक्सोलोन) , २२6 6०, 800०० मिलीग्राम ट्याब्लेटका लागि मेटाक्सलोन कुपनहरू पाउनुहोस् मेटाक्सलोन विवरण
सोमा (carisoprodol) 60 ,०, 350 350० मिलीग्राम ट्याब्लेटका लागि Carisoprodol कुपनहरू पाउनुहोस् Carisoprodol विवरण
Valium (diazepam) 30 for० को लागि $ २, mg मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू डायजेपम कुपनहरू पाउनुहोस् Diazepam विवरण
Zanaflex (tizanidine) 30 for०, mg मिलीग्राम ट्याब्लेटका लागि .$ टिजनिडाइन कूपनहरू पाउनुहोस् Tizanidine विवरण
मांसपेशी रिलैक्सन्ट के हो?
मांसपेशी शिथिल मांसपेशी spasms को उपचार। तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईलाई मांसपेशी रिलैन्स्टेन्ट सल्लाह दिनका साथ अन्य उपायहरू जस्तै आराम, शारीरिक उपचार, र बरफ वा तातो सुझाव दिन्छ, जब तपाईलाई गम्भीर चोटपटकबाट निको पार्न मद्दत गर्दछ। केहि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु मात्र एक मांसपेशि आराम दिन्छ NSAID पर्याप्त रूपमा दुखाई कम छैन।
चोटपटक वा तीव्र दुखाइको लागि मांसपेशी शिथिल अधिकतम दुईदेखि तीन हप्ता मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ। केहि मांसपेशि आराम गर्ने मल्टिपल स्क्लेरोसिस जस्ता दीर्घकालीन अवस्थाको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ र स्वास्थ्यकर्मी पेशेवरको निगरानीमा लामो समयसम्म लिन सकिन्छ।
मांसपेशी शिथिल कसरी काम गर्छन्?
गम्भीर चोटपटकका लागि सोमा वा रोबक्सिन जस्ता एन्टिस्पास्मोडिक मांसपेशी शिथिलता मांसपेशीमा काम गर्दैन। तिनीहरू केन्द्रीय स्नायु प्रणाली (CNS) मा काम र CNS डिप्रेशन को कारण। CNS डिप्रेसनको कारणले बेहोश हुन र मांसपेशिमा आराम गर्ने गतिविधि गर्दछ।
एन्टिस्पेस्टिक मांसपेशी शिथिल dantrodne सीएनएस मा सीधा काम गर्दैन। ड्यान्ट्रोलीनले कंकालको मांसपेशीमा काम गर्दछ, संकुचन प्रतिक्रियालाई असर गर्दछ, विश्रामको कारण गर्दछ। बाक्लोफेन पनि एक एन्टिस्पेस्टिक मांसपेशी आराम गर्ने काम हो। बेक्लोफेनले काम गर्ने तरीका पूर्ण रूपमा बुझिएको छैन, तर यसले सीएनएस डिप्रेसन निम्त्याउँछ।
Valium एक बेंजोडायाजेपाइन हो। यद्यपि यो सामान्यतया चिन्ताको लागि प्रयोग गरिन्छ, यो कहिलेकाँही यसको मांसपेशी-आराम प्रभावहरूका लागि सिफारिस गरिन्छ। Valium ले GABA, वा गामा-एमिनोब्युट्रिक एसिड भनिने न्युरोट्रान्समिटरमा काम गर्दछ, यसले यसको आराम प्रभाव पार्दछ।
मांसपेशी शिथिलहरू केको लागि प्रयोग गरिन्छ?
तीव्र, दर्दनाक Musculoskeletal चोट
पछाडि दुखाई वा तल्लो पीठ दुख्ने
कठोर व्यक्ति सिन्ड्रोम
मांसपेशी रिलैक्सन्टहरू प्राय जसो तीव्र, दर्दनाक चोटपटकबाट मांसपेशीहरूको ऐंठनलाई कम गर्न प्रयोग गरिन्छ। यी औषधीहरू अल्पकालीन प्रयोगको लागि प्रयोग गरिनुपर्दछ। तिनीहरूलाई आराम, शारीरिक उपचार, र बरफ वा तातोसँगै प्रयोग गर्नुपर्दछ — तपाईंको स्वास्थ्य सेवा पेशेवरहरूले यी अन्य उपायहरूको बारेमा मेडिकल सल्लाह दिन सक्छन्।
केही मांसपेशी विश्रामकर्ताहरू उनीहरूको मांसपेशी आराम गर्ने गतिविधिको लागि प्रयोग गरिन्छ, तर ती तपाईंको विशिष्ट तीव्र मांसपेशीमा चोटपटकको लागि प्रयोग गरिदैन। उदाहरण को लागी,लिओरेसल (ब्याक्लोफेन)एक मांसपेशी शिथिल र एन्टिस्पेस्टिक हो। यसले मल्टिपल स्क्लेरोसिससँग सम्बन्धित spasms (spastyity) लाई व्यवहार गर्दछ, र कहिलेकाँही मेरुदण्डको रोग वा अवस्थाका कारण।डन्ट्रियम (ड्यान्ट्रोलीन) ले मल्टिपल स्क्लेरोसिस, मेरुदण्डमा चोटपटक, स्ट्रोक, वा सेरेब्रल पाल्सी जस्ता अवस्थाबाट स्पेस्टीसिटी व्यवहार गर्दछ।
मांसपेशी आराम गर्ने प्रकार
एन्टिस्पास्मोडिक्स (तीव्र मस्कुलोस्केलेटल अवस्थाका लागि)
एन्टिस्पास्मोडिक्स परम्परागत रूपमा तीव्र, दर्दनाक मस्कुलोस्केलेटल चोटहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणको लागि, यदि तपाइँ तपाइँको पछाडि बाहिर फालनुभयो र सार्न सक्नुहुन्न भने, एक एन्टिस्पास्मोडिक उचित हुन सक्छ, यदि एक NSAID पर्याप्त छैन। एन्टिस्पासोडिक्सका केही उदाहरणहरू फ्लेक्सेरिल, रोब्याक्सिन, सोमा र नोर्फ्लेक्स हुन्।
एन्टिस्पास्टिक्स, जस्तै Lioresal र Dantrium, तीव्र मांसपेशी चोट को लागी प्रयोग गरीरहेको छैन। तिनीहरूले splems मल्टिपल स्क्लेरोसिस वा मेरुदण्ड चोटपटक जस्तो अवस्थाबाट उपचार गर्न सक्दछन्। डेन्ट्रियमले स्ट्रोक र सेरेब्रल पाल्सीको उपचार पनि गर्दछ।
Valium (diazepam) एक बेन्जोडियाजेपाइन हो जसले चिन्तालाई व्यवहार गर्दछ। यद्यपि यसले मांसपेशीहरूलाई आराम दिन पनि मद्दत पुर्‍याउँछ। Valium मांसपेशियों को ऐंठनको कारण मांसपेशीमा चोटपटकको साथसाथै मस्तिष्क पाल्सी जस्ता माथिल्लो मोटर न्युरोन डिसआर्डरको कारणले व्यवहार गर्न सक्छ।
कसले मांसपेशी आराम गर्न सक्छ?
सामान्यतया, वयस्क पुरुषहरूले मांसपेशी विश्राम लिन सक्दछन् जबसम्म तिनीहरू तलका प्रतिबन्धहरू मध्ये कुनै एकमा नपर्दछ।
सामान्यतया, वयस्क महिलाहरूले मांसपेशि आराम लिन सक्दछन् जबसम्म तिनीहरू गर्भवती हुँदैनन् वा तलका अन्य प्रतिबन्धहरूमध्ये एक मुनि जान्छन्।
कसरी घर मा कान संक्रमण निकासी
किनभने प्रायः मांसपेशी शिथिलता बच्चाहरूमा अध्ययन गरिएको हुँदैन, तिनीहरू सामान्यतया बाल रोगीहरूलाई सिफारिस गर्दैनन्। ड्यान्ट्रोलीन पेडियाट्रिक बिरामीहरूमा केहि पुरानो अवस्थाहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन स्पेस्टीटी पैदा गर्दछ, जस्तैमेरुदण्डको चोट, सेरेब्रल पाल्सी, वा बहु स्क्लेरोसिस
ठूला वयस्कहरूले सामान्यतया मांसपेशी शिथिलहरू लिनु हुँदैन किनभने उनीहरूसँग सम्बन्धित साइड इफेक्टहरू र जोखिमहरू। मांसपेशी विश्रामकर्ता तल सूचीबद्ध छन् बियर सूची वयस्क वयस्कहरूको लागि सम्भावित अनुपयुक्त औषधिहरूको। बियर सूची दिशानिर्देश भन्छन कि उमेर वयस्कहरूले साइड इफेक्ट, बेहोरापन, र फ्र्याक्चरको बढेको जोखिमको कारण प्रायः मांसपेशी शिथिलताहरूलाई असह्य रूपमा सहन गर्दछ।
के मांसपेशी शिथिलहरू सुरक्षित छन्?
मांसपेशी शिथिल याद गर्दछ
रोबक्सिन रिकल (मे २०१ May)
Cyclobenzaprine रिकल (फेब्रुअरी २०१))
मांसपेशी विश्राम निषेध
तपाइँको डाक्टरलाई भन्नुहोस् तपाइँसँग भएका सबै मेडिकल अवस्थाको बारेमा। केहि मांसपेशी विश्रामहरू कलेजोको समस्यासँग सम्बन्धित छ। यदि तपाईं कलेजो वा मिर्गौला / मूत्र समस्या वा मोतियाबिन्दु छ भने, यो एक मांसपेशी आराम तपाईं लिन को लागी सुरक्षित छ कि विशेष औषधीमा निर्भर गर्दछ असर गर्न सक्छ।
माथी सूचिकृत सामान्य प्रतिबन्धको बाहेक, मांसपेशी आराम गर्नेको सुरक्षाको लागि व्यक्तिगत सल्लाहको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्, किनकि सबैको बिभिन्न लक्षण र अद्वितीय मेडिकल ईतिहास हुन्छ जसले तपाईंको लागि कुन औषधी सुरक्षित र सबैभन्दा उपयुक्त छ भन्ने कुरालाई असर गर्न सक्छ।
मांसपेशी विश्राम गर्ने विभिन्न औषधि अन्तर्क्रिया गर्दछ। एसएसआरआई, एसएनआरआई, वा अन्य एन्टिडिप्रेसन्ट्स, ओपिओइड दुखाइ औषधी, खोकी दबाउने, माइग्रेन ट्राइप्टन ड्रग्स, जस्ता अन्य औषधीहरूको साथ मांसपेशी रिलैक्सन्टहरू संयोजन गर्दा सम्भावित जीवनलाई जोखिममा पार्ने अवस्था हुन सक्छ। सेरोटोनिन सिन्ड्रोम ।
Valium को एक छ कालो बक्स चेतावनी , जो संयुक्त राज्य अमेरिका मा एफडीए द्वारा आवश्यक कडा चेतावनी हो। एक ओपिओइडको साथ Valium नलगाउनुहोस्। बेन्जोडियाजेपाइनको संयोजन, भोलियम जस्ता ओपियोइड दर्दको औषधिको साथ गहिरा बेहोरा, सास फेर्न ढिलाइ, कोमा र मृत्यु हुन सक्छ।
प्रिस्क्रिप्शन, ओटीसी, र भिटामिनसहित तपाईले लिनुहुने सबै औषधिहरूको बारे तपाईको हेल्थकेयर प्रदायकलाई बताउनुहोस्, ताकि ऊ वा उनीले निर्धारण गर्न सक्दछ कि यदि तपाईले लिनु भएका अन्य औषधिको साथ मांसपेशी आराम गर्ने ठाउँ सुरक्षित छ कि छैन।
मांसपेशी आराम र रक्सी
मांसपेशी आराम गर्ने समयमा रक्सी नपिनुहोस्। मदिरा र अन्य CNS डिप्रेसनन्टहरूले मांसपेशि आराम गर्नेसँग जोडिएमा थप असरहरू निम्त्याउँदछ।
एक मांसपेशी आराम ले गर्दा ड्राइभ वा मशीनरी सञ्चालन नगर्नुहोस्।
तपाईंको डाक्टर वा फार्मासिष्टलाई सोध्नुहोस् कि यदि तपाईंले खानाको साथ वा खाली पेटमा तपाईंको मांसपेशीलाई आराम दिनुहुन्छ।
यदि तपाईं मांसपेशिलाई आराम दिईरहनु भएको छ र एलर्जीको लक्षणहरू छ भने, जस्तै पित्ती, सास फेर्न गाह्रो, वा ओठ, जिब्रो वा घाँटीको सूजन, आपतकालीन चिकित्सा उपचार खोज्नुहोस्।
जब एक मांसपेशी आराम बन्द, तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक सोध्नुहोस् यदि तपाइँ यसलाई बिस्तारै Taper गर्नुपर्छ। केहि मांसपेशी शिथिल अचानक फिर्ता रोक्न लक्षण फिर्ता लिन सक्छ।
के तपाईं गर्भवती वा स्तनपानको समयमा मांसपेशी विश्राम लिन सक्नुहुन्छ?
सामान्यतया, मांसपेशी शिथिल गर्भवती महिलालाई सिफारिस गरिएको छैन। यस जनसंख्यामा सुरक्षा स्थापना गर्न पर्याप्त अध्ययनहरू छैनन्। तसर्थ, मांसपेशी विश्रामहरू मात्र सिफारिश गरिनु पर्छ यदि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले जोखिमलाई भन्दा बढी लाभ उठाउँदछ। मांसपेशी शिथिलहरू सामान्यतया स्तनपान गराउने आमाहरूमा प्रयोग गरिदैन। चिकित्सा सल्लाहका लागि तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श गर्नुहोस् यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भने, गर्भवती हुने योजना बनाउनुहोस्, वा स्तनपान गराउनुहोस्।
के मांसपेशी शिथिल पदार्थहरू नियन्त्रणित पदार्थहरू हुन्?
सोमा र वैलियम हुन् नियन्त्रित पदार्थ । यसको मतलब तिनीहरूसँग दुरुपयोग र निर्भरताका लागि सम्भाव्यता छ। यी औषधिहरूलाई वेवास्ता गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग एक पदार्थ प्रयोग डिसअर्डरको ईतिहास छ। अन्य मांसपेशी रिलैक्सन्टहरू नियन्त्रणित पदार्थहरू हुँदैनन्।
सामान्य मांसपेशी शिथिल पार्ने साइड इफेक्टहरू
विशिष्ट साइड इफेक्ट ड्रग र डोज द्वारा फरक हुन सक्छ। मांसपेशी आराम गर्ने को सबै भन्दा सामान्य पक्ष प्रभावहरु:
तन्द्रा वा थकान
जीआई (जठरांत्र) समस्या पेट जस्तो दुखाइ, मतली, बान्ता, कब्ज, पखाला जस्ता।
टाचिकार्डिया (छिटो मुटुको धडकन)
यो सम्भावित साइड इफेक्टको पूर्ण सूची होईन। अन्य साइड इफेक्ट हुन सक्छ। तपाईका डाक्टरलाई सोध्नुहोस् कि तपाईले कस्ता साइड इफेक्टको अपेक्षा गर्नु पर्छ र कसरी उनीहरुलाई सम्बोधन गर्ने।
मांसपेशी आराम गर्ने खर्च कति हुन्छ?
मांसपेशी विश्रामकर्ताको को बारे मा $ 25 (को लागी एक विस्तृत मूल्य दायरा छ जेनेरिक Valium ) बाट $ २२6 ( जेनेरिक स्केलेक्सिन ), विशिष्ट औषधि, मात्रा, र खुराकमा निर्भर गर्दछ। मांसपेशी शिथिलहरू जेनेरिक फार्ममा उपलब्ध छन्, तपाईं ब्रान्ड नाम समकक्षको लागि भुक्तान गरिरहनुभएको भन्दा यदि तपाईंले कम्ति तिर्ने आशा गर्न सक्नुहुन्छ।
बीमा योजना प्राय जसो सामान्य मांसपेशी शिथिलता लाई कभर गर्दछ, र मेडिकेयर पर्चे योजनाहरु फरक हुन्छन्। कभरेज विवरणका लागि तपाइँको विशेष योजनाको साथ जाँच गर्नुहोस्।
तपाईं जहिले पनि नि: शुल्क प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ एकलकेयर कार्ड कुनै पनि भाग लिने फार्मेसीमा तपाईंको मांसपेशि आरामदायक पर्चीमा पैसा बचत गर्न। केही मांसपेशी शिथिलहरू एकल सिंगलकेयर कूपनको साथ केवल $4लागत गर्दछ।
२ हप्ता पछिbकामको योजना गर्नेछ
Zoloft को साथ मतली कति लामो हुन्छ?
के तपाईं कोलेस्ट्रोल औषधि सेवन गर्दा रक्सी पिउन सक्नुहुन्छ?
गर्भवती हुँदा मुटुको दर बढ्छ
मेरो रगत चिनी के खाना पछि hours घण्टा हुनु पर्छ
इरेक्टाइल डिसफंक्शनका लागि कसरी डाक्टरहरूले परीक्षण गर्छन्